११ हजार फिटमाथि उड्ने यो कार, मूल्य कति ? (फोटोसहित) | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
फ्रेन्च ओपन २०२० : करोलिना प्लिस्कोवा दोस्रो चरणमा
फेरि प्रतितोला ५ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
नोवाक जोकोविच फ्रेन्च ओपन टेनिसको दोस्रो चरणमा
डलर देखाई रकम लुटपाट गर्ने दुईजना पक्राउ
११ हजार फिटमाथि उड्ने यो कार, मूल्य कति ? (फोटोसहित)
access_time२०७६ साल मंसिर १८ गते, बुधबार ०७:४६ PM chat_bubble_outline Comments folder_open संसार विज्ञान प्रविधि रोचक​
एजेन्सी । संसारमै पहिलो पटक आकाशमा उड्ने कारको सफल परीक्षण गरिएको छ । अमेरिकामा परीक्षण गरिएको यो कार प्रतिघन्टा ३२१ किलोमिटरका दरले हावामा उड्न सक्छ । यसलाई सडकमा पनि कुदाउन मिल्छ । सडकमा यसको गति प्रतिघन्टा १६० किलोमिटर हुन्छ । यसको नाम PAL-V अर्थात पायोनियर पर्सनल एयर ल्याण्डिङ भेहिकल रहेको छ ।
उड्ने कारको मूल्य अमेरिकामा ७ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यो सन् २०२१देखि प्रयोगमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । नेदरल्याण्ड्सको कम्पनीले कारको बुकिङ pal-v.com वेभसाइट मार्फत गरिरहेको छ । डेलिमेलका अनुसार कार उत्पादन भने अहिले धमाधम भैरहेको छ ।
अहिले संसारभरका धेरै कार उत्पादन कम्पनीहरु उड्ने कारको कन्सेप्टमा काम गरिरहेका छन् । तर पल भीले पहिलो पटक व्यवसायिक परीक्षण र उत्पादन सुरु गरेको हो । कम्पनीले यो कार ११ हजार ५०० फिटको उचाइमा उड्न सक्ने जनाएको छ ।
कारमा दुई जना मात्र बस्न मिल्छ । कारमा पेट्रोलबाट चल्ने खालका ४ सिलिण्डर इन्जिन लाग्छ । १० मिनेटमा उड्ने र गुड्ने परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
कम्पनीले उड्ने खालको कार अहिले परीक्षण र मार्केटिङका लागि मात्र बनाइएको हो । कारको ल्याण्डिङका लागि ५४० फिट लामो रनवे आवश्यक पर्छ । कार १०० मिटरको रनवेमा पनि ल्याण्ड गर्न सकिन्छ ।
आईपीएल टी–ट्वान्टी क्रिकेटः हैदराबादको पहिलो जित
१५ वर्षमा अफ्रिकाबाट अबैध रुपमा ८ सय अर्ब डलर बढी बाहिरियो : राष्ट्रसंघ
कुवेतका शासक अमिरको ९१ वर्षको उमेरमा अमेरिकामा निधन